» हाम्रो टिमले तयार पारेको अन्तिम रिपोर्टमा के थियो त जुन प्रशारण गरिएन? – रबि लामिछाने ,त्यो सामग्री यहाँ हेर्नुहोस हाम्रो टिमले तयार पारेको अन्तिम रिपोर्टमा के थियो त जुन प्रशारण गरिएन? – रबि लामिछाने ,त्यो सामग्री यहाँ हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
हाम्रो टिमले तयार पारेको अन्तिम रिपोर्टमा के थियो त जुन प्रशारण गरिएन? – रबि लामिछाने ,त्यो सामग्री यहाँ हेर्नुहोस
काठमाडौं, बहुचर्चित कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संगका प्रस्तोता रबि लामिछानेले न्युज २४ छोडेको घोषणा गरेका छन् ।
“उनका अनुसार आज प्रसारण हुने सिधा कुरा जनता संगको एक भागमा मात्र रबि देखिने छन् । आज प्रशारण हुने कार्यक्रमसँगै न्युज २४ टेलिभिजन सँगको सुखद सहयात्राबाट विश्राम लिन लागेको उनले बताएका छन ।
“आज प्रशारण हुने कार्यक्रमसँगै News 24 टेलिभिजन सँगको सुखद सहयात्राबाट विश्राम लिदैछौ। यो साथ,सहयोग र अवसारकालागि सम्पुर्ण news 24 परिवार सहित अध्यक्ष आदरणीय अनिल जोशी ज्यु तथा निर्देशक अदिश जोशी ज्यु प्रति आभार व्यक्त गर्दछु।